Madaxweynaha Jubaland oo amar culus dul dhigay Saraakiisha laamaha Amaanka. | XAL DOON
Home NEWS Madaxweynaha Jubaland oo amar culus dul dhigay Saraakiisha laamaha Amaanka.
Madaxweynaha Jubaland oo amar culus dul dhigay Saraakiisha laamaha Amaanka.
Madaxweynaha Dowlada Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa kulan la qaatay Sarakiisha Hay’adaha Amniga iyadoo uu Madaxweynahu faray inay keenan baaritaanada dhacdooyinkii u danbeeyay ee dhinaca Amniga ah oo ay ugu danbaysay qaraxii Shalay Shabaab ay la beegsadeen dad Shacab ah iyo Masuuliyiin kasoo baxay masaajidka qadiim ee Magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha ayaa Sarakiisha Ciidamada Darawiishta ka dhagaystay natiijada howlgalka ka socda wadada xiriirisa Degmooyinka Kismaayo iyo Afmadow isagoo amaanay sida Ciidamada geesiyada ah ay u naafeeyeen Shabaabkaa.
Maxey ka wada hadleen ra’iisul wasaare Rooble iyo madaxweynaha Hirshabelle?